React Mobile, mupi anovimbika zvikuru wemhinduro dzekuvhunduka mabhatani ehotera, uye Curator Hotel & Resort Collection (“Curator”) nhasi vazivisa chibvumirano chemubatanidzwa chinogonesa mahotera ari muKuunganidzwa kushandisa React Mobile's best-in-class security device platform kuchengetedza yavo. vashandi vakachengeteka. Kupisa...
Chirevo ichi chinoratidzawo muna 2020, apo denda rakaputika nepakati pechikamu, 844,000 Kufamba & Tourism mabasa akarasika munyika yose.
Tsvagiridzo yakaitwa neWorld Travel & Tourism Council (WTTC) yakaratidza kuti hupfumi hweEgypt hunogona kutarisana nekurasikirwa kwezuva nezuva kweanodarika EGP 31 miriyoni kana ikaramba iri parwendo rweUK 'red list'. Zvichienderana nemazinga e2019, chimiro cheEgypt senyika yeUK's 'red list' ichaunza dambudziko rakakosha ...
American Hotel Income Properties REIT LP Inoshuma Chikamu Chechipiri 2021 Zviwanikwa
American Hotel Income Properties REIT LP (TSX: HOT.UN, TSX: HOT.U, TSX: HOT.DB.U) yakazivisa nezuro mibairo yayo yemari yemwedzi mitatu nemitanhatu yakapera June 30, 2021. "Chita chechipiri chakaunza zvitatu. mwedzi inotevedzana yekuvandudza mari uye miganho yekushandisa, maitiro akatanga mu...